Digniinta Ogaanshaha ee Ilaali Calaamadaha Meelkasta ee AŞTİ | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraDigniinta Ogaanshaha oo xafid Astaamaha Muujinta ee AŞTİ
25 / 03 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, SAWIRADA, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Digniinta wacyiga oo ay ku jirto neefta
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara ayaa sii wadaysa digniinta muwaadiniinta iyaga oo qaadaya talaabooyin cusub oo lagula dagaallamayo faafitaanka coronavirus. Codsigan cusub ee lagu bilaabay Başkent, dhejiyeyaasha 'fogaan-xajiskaaga' waxaa la dhigayaa dhismayaasha adeegga ee Dawladda Hoose, gaar ahaan AŞTİ. Isagoo sheegay in ay bilaabeen in ay suuqyada u qeybiyaan dhiirigelin “dhejisyo” suuqyada, Madaxa Qeybta Booliska Magaalada Caasimadda Mustafa Koç ayaa sheegay in ay ujeedadoodu tahay in kor loogu qaado wacyiga muwaadiniinta caafimaadkooda iyo caafimaadka kuwa kale.
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara ayaa sii wadaysa dagaalka ay kula jirto cudurka dilaaga ah ee coronavirus iyadoo la qaadayo tillaabooyin cusub.
Ku sii wadida digniinaha ay ku leedahay xisaabaadka warbaahinta bulshada, shaashadda magaalada iyo waraaqaha lagu dhejiyo oo leh "HomeKal", Dowlada Hoose ee Magaaladu waxay diyaarisay "masaafadaada" ilaaliyeyaasha kor u qaadida wacyiga.
CODSIGA LABAAD EE AŞTİ
Ku meelaynta "calaamadahan" AŞTİ, halkaas oo taraafikada rakaabka lagu arko, Dowlada Hoose ee Magaalada waxay xaqiijineysaa in muwaadiniinta sugaya safka tigidhada xafiisyada shirkadaha basaska horteeda digniintaan.
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in shaqada kahortaga jeermiska ay ka sii socoto AŞTİ caafimaadka bulshada, Madaxa Qeybta Boliska Magaalada Metropolitan Mustafa Koç wuxuu sheegay inay rabaan inay kor u qaadaan wacyiga muwaadiniinta iyadoo la adeegsanayo waxyaabaha lagu naseeyo dhulka, wuxuuna yiri:
Waxaan danaynaynaa daraasadaha ku saabsan jeermiska jeermiska si looga hortago faafitaanka coronavirus. Ka sokow taas, waxaan u qaadaynaa halgankaas tallaabo dheeri ah oo aan ka shaqeyneyno sidii aan dadkeenna uga wacyi-gelin laheyn ilaalinta fogaanta bulshada. Waxaa jira hoos u dhac aad u daran tirada rakaabka, laakiin AŞTİ, waxaan ka sameynay "dhejisyo" meelaha sugitaanka ee masalaha horteeda waxaanan ku dhejinay wiishashyada hortiisa. Wareegtada wasaaradda arrimaha gudaha ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa la hirgaliyay si loogu fadhiisto hal qof laba kursi oo basas ah, iyo in lagu fariisiyo isgoysyada gadaal iyo kuraasta hore. Waxaan taas ku ogeysiinay shirkadaha basaska dhexmara. Waxaan la soconaa fulintiisa annaga oo adeegsaneyna booliska iyo ilaalada amniga. Shirkaduhu khasaare weyn ayey ku soo gaaran dakhliga. Tilmaanta Madaxweynahayaga Mudane Mansur Yavaş iyo go'aanka Guddiga Agaasimayaasha ee BUGSAŞ, waxaan hoos ugu dhignay khidmadda laga helo basaska badh marka laga baxo AŞTİ. Waxaan u aragnaa xasaasiyad muwaadiniinteenna. Waxaan u yeerayaa dhammaan dadka deggan Ankara, fadlan guriga joog, sii fogaanta bulshada marka aad baxeyso, kahortag faafitaanka viruska. ”
Mehmet Bingöl, oo ka shaqeeya xafiiska iibka tikidhada ayaa sheegay in dalabka cusub uu yahay mid faa iido leh wuxuuna yiri, “Calaamadaha dheelitirka bulshada aad ayey u faaiiday. Waxaan ka codsaneynaa inay nala hadlaan ayagoo taagan istaagistayaasha si ay kor ugu qaadaan wacyiga ka dhex jira rakaabka. Dowladda Hoose ee Magaaladu waxay sii wadaysaa dadaalkeeda si ay ula dagaallanto fayraska AŞTİ. Waxaan rabaa inaan halkaan ka sheego qanacsanahayda Mansur Yavaş halkan. ”Faruk Çayan, oo u safray Denizli, wuxuu carrabka ku adkeeyay muhiimadda digniinta iyo taxadarka,“ Waxay geliyeen kamarad kuleylka albaabka tuubada, codsigan ayaa soo jiitay dareenkeyga. Si aan u ilaaliyo fogaanta bulshada, waxaan arjigaan ku arkay mid aad u guul badan, oo ku dheji dhejisyo dabaqyada iyo wiishashka. Markii uu yimid baska, milkiilaha shirkadda wuxuu qaybiyay maaskaro, Dawladda Hoose ee Magaalada waxay abuurtay wacyi galin ku saabsan qof walba. Hal kursi ayaa looga tagay basaska masaafada bulshada. Waxaan aaminsanahay in haddii qof walba uu qaato taxadarka lagama maarmaanka ah, inaan ka gudbi doonno maalmahan adag sida ugu dhaqsaha badan ”.
SIDII LAGU SAMEEYAY SARIIRADA
Madaxa booliiska, Mustafa Koç, wuxuu sheegay inay guriga ugu yeeraan waraaqaha lagu dhejiyo calaamadaha digniinta ee suuqyada ay muwaaddiniintu si deg deg ah u isticmaalaan.
Koç, oo baaritaan ku sameeyay kooxaha boolis ee suuqyada laga adeegsaday, ayaa bixiyay macluumaadka soo socda:
“Iridda laga galo suuqyada, waxaan sudhannaa 'guriga tag marka aad dhamayso dukaameeyaha' waraaqaha digniinta. Wareeg kale oo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa loo wareejiyay degmaddeenna. Si loo waafajiyo wareegtada go'aamisa tirada macaamiisha ee lagu heli karo iyadoo loo eegayo mitirka laba jibaaran ee suuqyada, waxaan dhejinay digniino muujinaya inta macaamiil ee soo gali kara suuqa suuqyada. Waxaan sidoo kale ku dhejinaa dhejisyada 'xajista masaafadaada' sagxadda dhulka si looga hortago isu-ururinta kiiska hortiisa. Waxaan rabnaa inaan ku fidinno waxbarashooyinka Ankara oo dhan. ”
Isagoo cadeeyay inuu arkay dhajidhayaasha markii ay wax adeeganayeen, Tuncer Ömür wuxuu yidhi, "Waa inay jirto masaafad u jirta caafimaadka. Codsi aad u macquul ah Aad ayaan ugu faraxsanahay dhaqanka ku haynta masaafada u dhaxaysa macaamiisha marka aan ka ganacsanayay khasnajiga. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo madaxweynahayaga iyo qof walba oo gacan ka gaystay. ”
XARUNTA TIRADA EE LIISKA
Dhejimaha, oo bilaabay in lagu meeleeyo dhismayaasha adeegga ee Dawladda Hoose ee Magaaladda, ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa wiishashka.
Iyadoo mudnaanta la siinayo caafimaadka shaqaalaha leh dhejisyo leh digniino la xiriira ilaalinta fogaanta bulshada, Dowlada hoose ee Magaalooyinka ayaa ka diga 4 qof inay ka qaadaan wiishashka khatarta cudurka faafa. Başak Yılmaz oo ka tirsan shaqaalaha Metropolitan ayaa yidhi, Waxaan ku qanacsanahay talaabooyinka la qaaday si loo ilaaliyo caafimaadka shaqaalaha. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo cid kasta oo gacan ka gaysatay, gaar ahaan Duqa Magaaladeena Mansur Yavaş. Cusmaan Özcan wuxuu yiri waxaan u maleynayaa in calaacalayaasha ay kujiraan digniinta fogaanta bulshada ee caafimaadka ay tahay mid wax ku ool ah, wuxuuna yiri, "Waxaan kahelay dhaqannada aan ku ilaalinayno masaafada bulsheed ee ay degmaddeenna billowday cudurrada faafa"
Calaamadaha goobta ku dhejisan ayaa lagu dabaqi doonaa Xarummaha Xaruntan iyo ANKARAY, halkaasoo muwaadiniintu maalin kasta u safraan, waqti gaaban.